Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne Tasarruflu Aydınlatma | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliKocaeli Intercity Bus Terminal မှစွမ်းအင်ထိရောက်သောအလင်းရောင်
21 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ထိရောက်မြို့ပြဘတ်စ်ကား terminal ကို
Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၊ TransportationPark ၏တွဲဖက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် A.Ş. 69 လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုကုမ္ပဏီမှလည်ပတ်ခဲ့သော Intercity Bus Terminal ရှိအလင်းအမှောင်ဟောင်းများကိုအစားထိုးခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည်။
Metropolitan မြူနီစီပယ်၊ 150 ၏အလင်းရောင်အရေအတွက်သည်ဘတ်စ်ကားဘူတာတွင်ရှိပြီး 90 LED luminaires ၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်အလင်းပိုမိုများပြားစေခြင်းဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခဲ့သည်။ စနစ်သစ်ဖြင့်အထူးသဖြင့်ခရီးသည်များ terminal ကို ဝင်၍ ဘတ်စ်ကားစီးသည့်ဒေသများရှိနိုင်ငံသားများသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ချိန်တွင်တောက်ပသောနေရာများရရှိသည်။
480W LEDs အစား 150W LEDs
150 480 watts မီးသီးများအဟောင်းစနစ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သော Kocaeli Intercity Bus Terminal သည် 90 150 watts မှမီးသီးများကို Metropolitan Municipality တွင်အစားထိုးခဲ့ပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစုဆောင်းမှု၏ရာခိုင်နှုန်းသည် 69'luk ဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက်ထွန်းလင်းစေသောမီးခွက်များသည်မှောင်မိုက်ချိန် မှစ၍ အထူးသဖြင့် terminal ၏အပြင်ဘက်တွင် ပိုမို၍ တောက်ပသောနေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့်ငွေစုဆောင်းသည်။ မီးသီးအသစ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ခရီးသည်များနှင့်ကုန်သည်များအတွက်ဆိပ်ကမ်းရှိဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များထံမှအပြည့်အ ၀ ရနိုင်ခဲ့သည်။
Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်ရဲ့ဝင်ပေါက်များနှင့်ယာဉ်ရပ်နား Re-edit 20 / 06 / 2018 Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာကမြို့ပြဘတ်စ်ကားဂိတ်ကိုလုပ်တယ်။ Terminal သို့ဝင်သောယာဉ်ရပ်နားရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်ကားရပ်နားရန်နေရာတွင်အစီအစဉ်တကျစီစဉ်ထားသည်။ ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများကိုအဝါရောင်လိုင်းများဖြင့်ခွဲထားသည်။ 11 တစ်ထောင်စတုရန်းမီတာ…
ulaşımparkလုံခြုံရေး Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်စွန်ငှက်မ 29 / 03 / 2019 Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၊ TransportationPark A.Ş. ၏လုံခြုံရေးသည် Kocaeli Intercity Bus Terminal တွင်ငှက်များကိုမပျံသန်းပါ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပါရဂူသည်ခရီးသည်များ၏လုံခြုံမှုကိုအလေးထားသည့် yyla အမျိုးအစားအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်စားသောက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သည် 08 / 08 / 2019 Kocaeli Intercity Bus Terminal သည် Kurba ပွဲ၏သိပ်သည်းမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်။ နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးအပြင်၊ နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ပိုမိုသန့်ရှင်း။ ပိုမိုကျယ် ၀ န်းသောသန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရောက်ရှိရန်သေချာစေရန်အသေးစိတ်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ …
Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်နေ့ကြိုဆို 42 လာရောက်လည်ပတ်သူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ 20 / 08 / 2019 Kocaeli Metropolitan Municipality ၏တွဲဖက်တစ်ခုဖြစ်သည့် TransportationPark A.Ş. က Eid al-Adha မတိုင်မီကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ပြင်းထန်မှုကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Kocaeli Intercity Bus Terminal ၏လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်သည့် TransportationPark တွင်ပြproblemsနာမရှိပါ
Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်ပြန်လည် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းစနစ် 26 / 08 / 2019 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်၏တွဲဖက်များအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Kocaeli Intercity Bus Terminal ကိုလွှဲပြောင်းယူသည့် နေ့မှစ၍ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကိုနိုင်ငံသားများရော၊ ကုန်သည်များနှင့်ပါသက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပါက terminal တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောရေကြီးမှုများ…
Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်ရဲ့ဝင်ပေါက်များနှင့်ယာဉ်ရပ်နား Re-edit
ulaşımparkလုံခြုံရေး Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်စွန်ငှက်မ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: 12 ကွင်းဆင်း Lighting စနစ်များ၏ Derince ဆိပ်ကမ်းကလောင် Lighting နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသုံးပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြောင်းခြင်းနယူးနည်းပညာသိမ်းဆည်းခြင်းအဘို့အ (တပ်ဆင်ခအပါအဝင်) စားသုံးမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Lighting အလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır (Goncalıဘူတာ Shunting Yard အလင်းပေးခြင်း)
IETT ဘတ်စ်ကား Stop အလင်းအမှောင်စနစ်တပ်ဆင်ထားခံရ